Nagu saabsan - Zhejiang Benyu Tools Co., Ltd.
Ku saabsan Benyu
Zhejiang Benyu Tools Co., Ltd.(magacii hore ee Zhejiang Zhongtai Tools), oo la aasaasay 1993, waa soo saare qalab koronto oo xirfad ku leh Shiinaha. In kabadan 27 sano oo shaqo adag ah iyo hal-abuurnimo isdaba-joog ah, shirkaddu waxay aasaastay nidaam hufnaan R & D, wax soo saar, suuq-geyn iyo adeegga iibka kadib.
Benyu waxay ku taalaa magaalo xeebeed qurux badan — Taizhou, oo ka tirsan gobolka Zhejiang, halkaas oo nalkii ugu horreeyay ee millennium cusub uu ka kacay. Shirkaddu waxay daboolaysaa 72,000 mitir murabac ah, waxaa jira wadar ahaan 11 aqoon isweydaarsi, oo ay ku jiraan qalabaynta, farsamaynta qallafsan, goynta qalabka, qalabka aluminiumka, feer, daaweynta kuleylka, shiidi, boodboodka, cirbadda caagga ah, matoorka iyo aqoon isweydaarsiga shirarka.
Ku dhowaad 900 oo shaqaale ayaa u shaqeeya shirkadda. Awoodda wax soo saar sanadle ah waa 3 milyan oo go'an, ku dhowaad 80% ka mid ah waxaa loo dhoofiyay Yurub, Koonfur-bari Aasiya, Bariga-dhexe, Afrika iyo Koonfurta Ameerika.
CILMIGA GANACSIGA FURAN
Ku siinta Macaamiil Xalka Wax-soo-saarka Tartanka waa caqiido shirkadeed.
Waxaan si firfircoon u soo bandhignaa nidaamka maaraynta sayniska, wax soo saarka horumarsan & qalabka baaritaanka si loo hubiyo in alaabooyin leh xasilooni tayo sare leh Benyupositivelymake ikhtiraac si loo hagaajiyo qaab dhismeedka wax soo saarka si loo daboolo baahida suuqa.
Marka la eego fikradda ganacsi ee "Hawlkarnimada, Pragmatism, Innovation, Development", Benyu wuxuu horay u sii ambaqaadi doonaa tayada wax soo saarka oo aad u wanaagsan, badeecado qaali ah oo wax ku ool ah iyo nidaamka adeegga iibka kaamil ah, si loo abuuro mustaqbal guuleysi leh dhammaan wada-hawlgalayaasha ganacsiga.
Adeegga OEM & ODM ee Xirfadlaha ah - ku wareeji fikradahaaga wax soo saar la taaban karo
Benyu waxay ka faa'iideysatay khibrad dhoofinta 20 sano ah, Benyu waxay leedahay awood xoog leh tiknoolajiyada wax soo saarka iyo awoodda naqshadeynta labadaba. Shirkaddu waxay samayn kartaa naqshadeynta 3D & soosaarida alaabada iyadoo loo eegayo fikradaha nashqadeynta macaamiisha ama shaybaarka dhabta ah, si loo hubiyo in codsigaaga gaarka ah lagu qanci karo.
Nidaamka Maareynta Sare iyo Shahaadooyinka Alaabada - Wehel galinta alaabada wanaagsan
Marka laga hadlayo shahaadooyinka, Benyu waxaa loo caddeeyay Nidaamka Maareynta Tayada ee ISO9001 iyo Nidaamka Maareynta SA8000 (La Xisaabtanka Bulshada). Badeecada ayaa ka gudubtay qiimeynta iswaafajinta caalamiga ah, sida GS / TUV, CE, EMC, CCC, ETL, ROHS iyo PAHS.
Shirkadda ayaa aasaastay oo soo saartay dubbe 1aad oo khafiif ah oo wareegga Shiinaha ah.
Bilow iibinta suuqa gudaha Samee Aqoon isweydaarsiga duritaanka caaga ah iyo aqoon isweydaarsiga birta.
Samee Aqoon Isweydaarsi Gawaarida, Aqoon isweydaarsiga Kuleylka.
Maalgeli Warshad cusub; Bilaw inaad sameyso suuq caalami ah.
Waxaa shahaadeeyay SO9001 Nidaamka Maamulka Tayada; Hel shahaadooyinka sheyga sida GS / CE / EMC.
Samee Aqoon Isweydaarsi Saxaafadeed; Iibso Saxaafad Xawaare Sare leh; Gudub shahaadada “CCC”.
Hel Diiwaangelinta Kastamka; Samee Waaxda R&D iyo Shaybaarka; Samee Workshop Gear Hobbing ah.
Ka dhiso warshad cusub aagga Binhai Industrial Area; Shayga ayaa soo gala Suuqa Ruushka;
Samee Aqoon isweydaarsiga aluminium.
Samee Aqoon isweydaarsi Qalab.
Samee Benyu Brand.
Shayga ayaa ku guuleystay Patent-ka Hindisaha Qaranka.
Waxaa la aasaasay "Saldhigga Iskaashiga Cilmi-baarista ee Jaamacadda-Cilmi-baarista" iyadoo lala kaashanayo Kuleejka Xirfadaha ee Sayniska iyo Teknolojiyada. Lagu siiyay cinwaan ah "Ganacsi Heer Caan ah Soo Dejinta iyo Dhoofinta" Ku guulaysatay caadooyinka A Enterprise management fasalka; Shirkadda ayaa ku guuleysatay soo dejinta iyo dhoofinta kormeerka iyo karantiil shirkadeed; Waxa uu maray Shahaadada Nidaamka Maareynta La Xisaabtanka Bulshada ee SA8000;
Waxaa la dhaafay hantidhawrkii "Waxsoosaarka Wax Soosaarka Badbaadada"
Waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay Taizhou High Tech Tech Enterprise oo ay Dowladdu aqoonsan tahay
Abaalmarinta sida Taizhou Technology Enterprise
La helay cinwaanka Magaca caanka ah ee Taizhou
Maalgashi si loo dhiso warshad cusub oo loo magacaabay unugga maamulka ee Ururka Daaweynta Kuleylka ee Taizhou